Jumlada, Macaamiisha, Tuulada Ballet, Tutu Waxqabadka Ballet, Dharka Ballet, Leotard Ballet, Soo-saaraha, Xirfadlaha - Warshadaha Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha â € factory Warshad baleedka Fitdance.
Hoyga > Hordhaca warshadda
Tani waa Fitdance.
Waxaan haynaa 20 sano oo horumar ah. Tayada iyo sumcadda alaabtayada ayaa si wanaagsan u soo dhoweeyeen macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnebiga ahba aadna way u qaddariyeen xirfadlayaal ku jira warshadaha qoob-ka-ciyaarka.
Waxaan u hoggaansameynay mabda'a ganacsiga ee "Tayada Koowaad, Amaahda Koowaad", oo u adeegaysa iskuulada waaweyn ee qoob-ka-ciyaarka iyo kuwa caashaqa adduunka oo dhan.
Shiinaha dhexdiisa, waxaan si qoto dheer ula shaqeyneynaa Ballet-ka gudaha, Guangzhou Ballet, Hong Kong City Ballet iyo shirkadaha kale ee qoob-ka-ciyaarka qaranka, waxaanan iskaashi la sameynay kumanaan iskuulo qoob-ka-ciyaarka ah iyo machadyo tababarro qoob-ka-ciyaarka ah illaa iyo hadda.
Dibedda, waxaan u adeegnay shirkado sida Flashdance Performing Arts, waxaanna siinnay qoob-ka-ciyaarayaal adduunka oo dhan leh waxqabadka ugu wanaagsan ee Ballet Tutu.
Fitdance waa xirfadle soosaara dharka dharka qoob-ka-ciyaarka isku dhafan qaabeynta, wax soo saarka iyo iibka; shirkaddu waxay ka kooban tahay aag ka badan 3,000 oo mitir murabac ah, waxay leedahay in ka badan 100 qalab wax soo saar ah, in ka badan 200 oo shaqaale ah, iyo wax soo saar sanadle ah oo ka badan hal milyan oo gogo '.
Dhexdooda, waaxda Ballet Tutu waxaa ku jira 4 naqshadeeyayaal xirfadlayaal ah iyo 20 shaqaale wax soo saar xirfad leh ah. Waxaan soo saari karnaa 800 Ballet Tutu bishiiba si aan ula kulanno caadadaada ama baahidaada jumlada ah.
Waxaan inta badan ku howlannahay qaabeynta iyo soo saarista dharka aasaasiga ah ee baleedka, oo ay ku jiraan balet Leotard, Dharka iyo Dharka.
Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale taageernaa ballet Tutu adeegyada loo habeeyay. Marka loo eego shuruudahaaga, waxaan si buuxda u fahmi doonnaa sheekada riwaayadda qoob-ka-ciyaarka, iyada oo la tixgelinayo midabada, dharka, qaababka, qaababka, uruurinta, iwm ee dharka, waxaanan ku siin doonnaa qorshaha ugu habboon.
Ama, waxaad si toos ah u bixin kartaa sawirro ama naqshadeynta naqshadeynta wax soo saar kasta. Naqshadeeyayaashayadu waxay isticmaali doonaan mabaadi'da 'CIS' si ay si taxaddar leh adiga kuugu qorsheeyaan, isla mar ahaantaana, iyagoo gacan ka helaya nidaamka CAD, waxaan u habeyn karnaa Tutu-ka saxda ah ee buuxiya baahiyahaaga.
Ku saabsan baakadaha
Iyada oo ku saleysan ilaalinta sheyga, waxaan dooran doonnaa kartoonka cabbirka u dhigma iyadoo la raacayo wadarta guud, yareynta mugga sida ugu macquulsan uguna yareeya xamuulka.
Ku saabsan saadka
Waxaan bixin karnaa habab gaadiid kala duwan sida DHL / EMS / SEA. Waxaad ku dooran kartaa hadba waqtiga dhalmada aad u baahan tahay. Waxaan kugu soo qaadan doonaa sida ku cad tirada la xaqiijiyay ee amarka.
DHL: 3-7 maalmood
EMS: 7-20 maalmood
Ku saabsan iibka kadib
Marka alaabtu dhammaato, waxaan kaa qaadi doonnaa sawirro oo waxaan kuu soo diri doonnaa sawirro si aan kuu ogeysiinno horumarkiisa.
Markay soo saarto nambarka biilka dhoofinta, waanu kuu soo diri doonaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah oo aan ula soconno dabagal.
Markay timaado goobta loo socdo, dib ayaan kula soo xiriiri doonaa si aan kuu xasuusino inaad alaabta hesho.
Markii aad hesho, waxaan kula socon doonnaa tayadeeda.
Shirkaddu waxay leedahay fulin heer sare ah, nidaam maamul nidaamsan oo adeegsi ah. Dharka qoob-ka-ciyaarka Feidance waxaa loogu talagalay saameyn masraxyo qurux badan iyo naqshad xirfadeed; qalab qurux badan oo raaxo leh; oo leh qalab dhar oo heer sare ah; oo leh farshaxan qurux badan; iyadoo la adeegsanayo qaab shaqeed daacad ah oo adag oo dadka Fitdance ah, Si taxaddar leh u farsamee badeecad kasta si ay kaaga dhigto xiddiga ugu ifaya masraxa.
Isbedelka howlaha magaalooyinka, dhulka horumarsan, gaadiidka cirka iyo hawada, iyo kaabayaasha saadka oo dhameystiran, waxaa aad ugu haboon in loogu adeego kuwa jecel qoob ka ciyaarka aduunka oo dhan.
Raadinta tayo aad u fiican iyo sameynta sumcad sumcad waa himiladeenna adag!
Fitdance, ku habboon dharkaaga qoob-ka-ciyaarka.